Nchekwa Ụmụaka, Organic Teethers, Sweetooth Baby Teether - Melikey
Nwa nri abalị
Nwa nri abalị Set
Nri iko Nwa
Ngwaahịa Silicone Teething
Ihe nkiri Pacifier
Mgbaaka / Mgbaaka / Gym
Egwuregwu ụmụaka na-agụ akwụkwọ
Baby Nri Setịpụrụ
N'ogbe - nhazi - OEM&ODM
Anyị nwere ọkachamara R & D otu na-enye OEM/ODM ọrụ. Ọkachamara na ụlọ ọrụ silicone maka afọ 10+
Melikey bụ akara ụmụaka silikoni nke China nwere nke Huizhou Melikey Silicone Product
A maara Melikey nke ọma maka ihe eji egwuri egwu ụmụaka silikone na ihe ụmụaka ji egwuri egwu silicone.
Gụnyere akwa ụmụaka silikone, efere nwa silicone, efere nwa silicone, ngaji nwa silicone,
silicone teethers na silicone beads, wdg China nwa ụmụaka ji egwuri egwu n'ogbe soplaya.
E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2016 ma dị na Huizhou City, Guangdong Province. Na
mbido, ụlọ ọrụ ahụ bụ naanị obere ogbako nwere onye na-ere ahịa 1.
Mmepe nke otu azụmahịa na-aga n'ihu na-eto eto, na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ahụ
agbasakwala . Onye na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ nne nke nwatakịrị.
N'ihi na ọ maara otú mkpa , the child’s health and safety is,the company’s first philosophy
bụ mgbe niile na "ịdị mma ngwaahịa bụ ndụ".
Ụlọ ọrụ ahụ eguzobela usoro nlekọta dị mma nke na-emezu ihe achọrọ nke
usoro nlekọta njikwa àgwà mba ụwa. Ụlọ ọrụ ahụ nọgidere na-ahapụ ihe
ọhụrụ mbụ dị ka ahịa na mkpa ndị ahịa si dị, ma na-edobe ihe ọhụrụ
na ihe ọhụrụ nke ngwaahịa.
Anyị nwere otu ọkachamara R & D. Anyị nwere ike ịnakwere OEM na OD M.
Nganga ịbụ China Top-notch Silicone Products Manufacturer & Silicone Products Wholesale Supplier
Melikey Silicone bụ aha pụrụ iche n'etiti ngwaahịa silicone kacha mma na China. Anyị nwere ihe karịrị 12 afọ ahụmahụ na factory n'ichepụta silicone ngwaahịa ebu. Anyị na-enyere ndị ụlọ ọrụ nnukwu na ndị nta gburugburu ụwa aka ịkwalite onwe ha n'ụzọ dị irè site na ike anyị na ụlọ ọrụ ngwaahịa wholesale silicone products suppliers. Proud to be the leading silicone teether manufacturer, baby toys wholesale suppliers.
Anyị na-eji akwa nri ọkwa silicone ihe na-arụpụta anyị silicone baby ngwaahịa N'ogbe ( silicone teether N'ogbe,silicone beads N'ogbe,nwa nri sets N'ogbe, Silicone efere N'ogbe,Silicone efere N'ogbe,silicone bib N'ogbe,silicone cup N'ogbe , na N'ogbe ụmụaka ụmụaka ụmụaka ) .
Afọ nke mmepụta ahụmahụ na-enye anyị ohere ijikwa ngwa ngwa dum mmepụta yinye, nke bụ anyị pụrụ iche uru dị ka ndị kasị mma emeputa nke silicone baby dinnerware na silicone toddler ụmụaka , na a siri ike na-ekwe nkwa na anyị na-enye N'ogbe mmepụta ihe maka silicone ngwaahịa.
Anyị tumadi n'ogbe nrụpụta na omenala . Ịmepụta ngwaahịa na nnukwu na-ebelata ọnụ ahịa otu na ọnụ ahịa mbupu nke ngwaahịa ahụ. Anyị na-anabatakwa obere iwu batch na ụfọdụ MOQ iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịnwale ngwaahịa anyị nke ọma ma nata nzaghachi ahịa ngwa ngwa. Kpọtụrụ anyị taa, kpakọrịta anyị n'ịntanetị ma ọ bụ kpọọ +86 13480570288 ka ịmalite ọrụ gị.
Melikey bụ onye na -eweta ngwaahịa silicone nwere ọrụ nhazi ụlọ ọrụ. Anyị na-akwado ihe ndị ahaziri ahazi dịka LOGO omenala, nkwakọ ngwaahịa, agba, wdg. Ihe ọ bụla omenala nwere MOQ dị iche iche. Site na imepụta ngwaahịa ruo na nhazi, Melikey na-enye ọrụ agbakwunyere uru kachasị mma maka ngwaahịa gị. Anyị na-akwado nhazi maka ngwaahịa niile, Nabata na iwu OEM&ODM!
Anyị na-etinye nnukwu mkpa n'ichepụta ngwaahịa anyị ma nwee patent. Na-etinyeghị nsogbu ọ bụla mmebi iwu, anyị na-agba mbọ ịmalite ngwaahịa mbụ na ime ka ngwaahịa anyị dị n'ụwa niile.
Nke a bụ ihe gbasara ngwaahịa silicone kacha mma na-ebubata ngwaahịa !
Silicone na osisi Teether mgbanaka omenala OEM l Mel ...
Nri ụmụaka Set Silicone tableware N'ogbe l...
Omenala Silicon Plate Set Set Food Custom L Melikey
Silicone Cup na ahịhịa ahịhịa nwa N'ogbe l Melikey
Ụlọ ọrụ na-ere ahịa silicone
Ihe ụmụaka ji egwuri egwu Silicone Montessori N'ogbe
Silicone Teething Ụmụaka BPA Free N'ogbe l Mel ...
Baby efere na ọkwá BPA Free N'ogbe lekọtara ...
Ọzụzụ Silicone Baby Cup Sippy Infant Eco Fri ...
Onye na-emepụta ngwaahịa silicone nke China na-eduga & Onye na-ebubata ngwaahịa Silicone
Dị ka a top silicone ngwaahịa emeputa na wholesale silicone ngwaahịa soplaya , anyị nwere ihe karịrị 12 afọ ahụmahụ n'ichepụta silicone ngwaahịa, isi ngwaahịa na-agụnye wholesale silicone teether,N'ogbe silicone chew Beads,N'ogbe nwa tableware, N'ùkwù nwa nri sets na ndị ọzọ silicone ngwaahịa. Ahụmahụ ọtụtụ afọ emeela ka agbụ azụmaahịa azụmaahịa anyị maka ngwaahịa silicone tozuru oke. N'otu oge ahụ, anyị nwere ọkachamara R&D Team, na anyị ga-enwe onwe haziri ngwaahịa silicone kwa ọnwa. Anyị nwere ike ịnye gị echiche ọhụrụ yana imecha atụmatụ ngwaahịa gị nke ọma.
Dị ka silicone ngwaahịa factory na ngwaahịa silicone kacha mma na-ebubata ngwaahịa, anyị na-anabata OEM na ODM omenala ọrụ, zitere gị imewe ka anyị, anyị nwere ike ime ezigbo sample n'ime 7 ụbọchị, tinye gị logo na wholesale toddler ụmụaka ,nnukwu baby teethers , silicone beads na baby tableware. , wdg. Anyị pụrụ iche silicone ngwaahịa factory specializes na nnukwu mmepụta nke silicone ngwaahịa. Ngwaahịa ọ bụla silicone abụghị nsogbu nye anyị. Ma ị bụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ akara, ụlọ ọrụ ngwaahịa silicone anyị kacha mma ga-enyere gị aka ịmalite azụmahịa gị ngwa ngwa site na iji ngwaahịa dị elu yana ọrụ zuru oke.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịhazi ngwaahịa silicone, biko nweere onwe gị kpọtụrụ anyị! Providing excellent customer service is the eternal pursuit of Melikey Silicone as the best supplier of silicone products!
Anyị nwere otu ọkachamara R & D. Nkwado customization, gụnyere ngwaahịa imewe, logo, ngwugwu, agba..... Anyị nwere ike na-anabata OEM na OD M.
Ahịrị mmepụta na-agbanwe agbanwe
ngwaahịa silicone maka gị, ọtụtụ ihe emepụtara, nwere obere oge ụzọ ụzọ. Ihe niile sitere na eziokwu ahụ bụ na anyị bụ ndị na-ebubata ngwaahịa silicone kacha mma.
Sistemụ njikwa ogo siri ike
Ndị na-ebubata ihe mgbe niile na-enye ihe. 100% QC akụrụngwa. Ngwaahịa silicone niile anwalela ule dị iche iche na mmepụta oke iji hụ na ọkwa dị elu, na ngwaahịa ọ bụla ga-enwerịrị nyocha siri ike tupu ọ dị njikere ibupu.
Ihe karịrị afọ 12 nke ọkachamara
Ọkachamara na ụlọ ọrụ silicone karịrị afọ 12. Melikey Silicone na-enye echiche ọhụrụ na-eme ka ọ dị mma na ịdị mma nke onye ibe anyị n'ebe ọrụ.
Okwu: 2F, actorylọ Ọrụ Flọ Ọrụ nke Andy Company, No.8 Mpaghara, Zhongkai High-tect Mpaghara, Huizhou, Guangdong, China 516000
© Nwebiisinka - 2010-2022: Ikike niile echekwabara. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,IGBOB Mobile
teething olu maka nwa nwanyị, kacha mma teether maka 4 ọnwa ochie , eke teething, silicone nwa teether , silicone teether , silicone teething chaplet ,